Alan Pardew oo ka carooday rigoorihii Liverpool - BBC News Somali
Alan Pardew oo ka carooday rigoorihii Liverpool
7 Maarso 2016
Image caption Alan Pardew aad ayuu uga xanaaqay rigooraha horseeday in laga badiyo
Tababare Alan Pardew ayaa aaminsan in ay ahayd in aan kooxdiisa lagu ganaaxin rigoorihii daqiiqadii 94-aad la siiyay kooxda Liverpool taas oo sababtay in laga guulaystay ciyaartii shalay ka dhacday garoonka Selhurst Park.
Kooxda Crystal Palace ayaa gool la hor martay iyada oo Liverpool ay ku ciyaarayeen 10 ruux kaddib markii laga saaray James Milner laakiin Damien Delaney oo khalad ka galay weeraryahan Christian Benteke ayaa sabab u noqotay in laga badiyo C Place.
Liverpool ayaa ciyaarta xakamaysay oo barbaro keensatay gooshaasi guusha ka hor.
Benteke oo reer Biljam ah ayaa dhaliyay gooshiisii u horaysay ee sanadkan 2016-ka.
Goosha ayuuna dhaliyay daqiiqadii 94 ee wakhtiga dheeriga ah ee ciyaarta lagu daray.
Pardew oo xanaaqsan ayaa sheegay in haddii iyaga khalad kaas oo kale laga gali lahaa aysan rigoore heleen.
Benteke oo horay ugu dheeli jiray kooxda Aston villa ayaa sheegay in uusan iska dheceen haddii aan la taabanin.
Delaney oo ninka guuldarada kooxda u sababay ah ayaa isna Instagram kiisa ku soo qoray "ha isku taabanin Benteke", saacad kaddib ayuu haddana soo qoray garsooruhu ma uusan ku qanacsanayn in ay rigoore tahay laakiin wuxuu aaminay caawiyihiisa ama calan sidahiisa.